चीनमा फैलिएको नयाँ भाइरस के हो ? Canada Nepal
काठमाडौँ। चीनमा फेरि नयाँ भाइरसको संक्रमण फैलिन सुरु भएको छ । पूर्वी चीनको जियाङसु प्रान्तमा पछिल्लो ६ महिनाको अन्तरालमा एसएफटीएस भाइरसबाट ३७ जना भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । यसैगरी पूर्वी चीनको अनहुई प्रान्तमा पनि यस भाइरसबाट २३ जना संक्रमित भेटिएको बुधबार चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
ग्लोबल टाइम्सका अनुसार यो भाइरसले पूर्वी चीनको अनहुई र झेजियांग प्रान्तमा अहिले फेरि कम्तिमा सात मानिसहरुको मृत्यु भइसकेको छ भने ६० भन्दा बढी मानिसहरु संक्रमित भएका छन् । यद्यपि, एसएफटीएस भाइरस नयाँ होइन। भाइरस सन् २०११ मा पहिलोपटक चीनमा पत्ता लागेको थियो। भाइरोलोजिस्टकाअनुसार यो भाइरस जनावरहरुमा पाइने किर्नाको माध्यमबाट संक्रमण हुन्छ र मानिसमा फैलिन सक्छ।
आखिर के हो एसएफटीएस (SFTS) भाइरस ?
एसएफटीएसको पूर्ण रुप सिभर फिभर सहित थ्रा‘म्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो जुन जनवारमा हुने किर्नाका कारण हुने गर्दछ। एसएफटीएस बुन्याभाइरसको परिवारसँग सम्बन्धित छ र किर्नाको टोकाईको माध्यमबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ। उक्त भाइरस चीनमा अन्वेषकहरुले एक दशक भन्दा पहिला पहिचान गरेका थिए। भाइरसको संक्रमण सन् २००९मा पहिलो पटक चीनको हुबेइ र हेनान प्रान्तको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भेटिएको थियो।
नेचरको एक रिपोर्टका अनुसार भाइरसबाट संक्रमण भएका व्यक्तिहरु कम्तिमा ३० प्रतिशतको मृत्यु भएको छ। रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि चीन सूचना प्रणालीकाअनुसार हालको यस भाइरसको संक्रमणबाट मानिसहरुमा मृत्युदर लगभग १६ देखि ३० प्रतिशतकोबीचमा रहेको छ। भाइरस फैलिएको दर र यसको उच्च मृत्यु दरका कारण, एसएफटीएस भाइरसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई १० प्राथमिकता रोगहरूको सूचीमा राखिएको छ।
भाइरोलोजिस्टकाअनुसार यस भाइरसको मुख्य वहाक एसियामा पाइने किर्ना हाइमाफिसलिस लाँगिकोर्निस हो। वैज्ञानिकहरुको खोजमा विशेषगरी यो भाइरस मानिसमा खसी बोका, गाईवस्तु, मृग र भेडाहरुबाट सर्ने पत्ता लागेको छ। भाइरसबाट संक्रमित भए पनि, जनावरहरूले सामान्यतया यस सँग सम्बन्धित कुनै लक्षणहरू नदेखाउने वैज्ञानिकहरुको बताएका छन्।
सन् २०११ मा चिनियाँ अन्वेषकहरूको टोलीले गरेको एक अध्ययनअनुसार यस रोगको शुरूवात भएको सात देखि १३ दिनको बीचमा यस रोगबाट पीडित बिरामीहरूले सामान्यतया ज्वरो, थकान, चिसो, टाउको दुख्ने, लिम्फडेनोपाथी, एनोरेक्सिया, पखाला, बान्ता, पेट दुख्ने जस्ता लक्षणहरु अनुभव गर्दछन्। यस रोगका केही प्रारम्भिक संकेतहरुमा गम्भीर ज्वरो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वा रगतमा पाइने प्लेटलेटको गणनामा कमि आउनु र ल्युकोसाइटोपेनिया हुन्छ, जुन कम सेतो रक्त कोष गणनामा कमि हो। यस रोगको गम्भीर मामिलामा बहुअंग विफलता, रक्तस्राव र केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा लक्षणहरु देखा पर्छन्।
भाइरस कहाँ कहाँ फैलिएको छ
भाइरस पहिलोचोटि फेला परेपछि जापान र दक्षिण कोरियालगायत अन्य पूर्वी एसियाली देशहरूमा भेटिएको छ र संक्रमित हुनेको कुल संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। नेचरले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०१३मा दक्षिण कोरियामा ३६ जना यस भाइरसबाट संक्रमितहरु फेला परेका थिए. जुन सन् २०१७ उक्त संख्या वृद्धि भएर २७० जना पुगेका थिए।
त्यसैगरी, चीनमा यस भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या सन् २०१०मा ७१ थियो जुन पछि सन् २०१६ बढेर २६ सय जनामा देखियो थियो। यस्तै, जापानमा सन् २०१६ र २०१७मा संक्रमितको संख्यामा ५० प्रतिशतले बढेको थियो।
श्रावण २३, २०७७ शुक्रवार १८:४७:५० बजे : प्रकाशित